पारिवारिक खुसीको लागि अपनाउन सकिने ४ उपायहरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
घर–परिवार त्यो स्थान हो जहाँ तपाईं आफ्नो सबै थकान भुलेर सहज महसुस गर्नुहुन्छ। तपाईं कस्तो ठाउँमा बस्दै हुनुहुन्छ त्यसले कुनै फरक पार्दैन, केवल परिवारको साथ आनन्दका साथ बाँच्नको लागि परिवार एउटा उपयुक्त स्रोत हो । जब तपाईंको घरमा एउटा आमाबाबु र बच्चाहरू हुन्छन् त्यसलाई एउटा परिवार मान्ने गरिन्छ । यही परिवारले हामीमा खुसीको सञ्चार भर्छ भने त्यही खुसीमा नै हामीले सबै कुरा फेला पार्न सक्छौं । तर यति हुँदाहुँदै पनि परिवारमा खुसीको सञ्चार भर्न सकिएन भने त्यसले खुसी भन्दा झमेला निम्त्याउन सक्छ । तर कसरी सञ्चार गर्ने त परिवारमा खुसीको ?
परिवारको अर्थ साथ हो । जसले खुसी र दुः खमा साथ दिने गर्छन् । सँगै बसेर खाना खाँदा पनि तपाईंको सम्बन्ध बलियो हुन्छ र परिवारमा प्रेम बढ्छ । यदि कुनैदिन तपाईं छुट्टिमा हुनुहुन्छ भने कतैको यात्रासँगै नविन किसिमको खानेकुरा पनि खान सक्नुहुन्छ । तर प्रायः जसो तपाईं परिवारको साथमा सँगै खाना खाने कोसिस गर्न सकिन्छ।
यसरी हामीले साना साना तरिकाबाट पनि परिवारमा खुसी बढाउन ठूलो भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ । आवश्यक छैन कि तपाईं परिवारको खुसीको लागि ठूलो वा महँगो खर्च गर्नुहोस् । समय समयमा तपाईं घरमा एउटा सानो भोजको आयोजना पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाईंको खुशी बढाउनेछ। (खबरदारी न्युज बाट सभार)